Ndezvipi yambiro yedzidzo? | Ehupfumi Zvemari
Iyo inonzi yambiro yemubhadharo iri pamusoro pezve yambiro nezve purofiti? nezvekambani yakanyorwa pamisika yemari. Kazhinji iri kudzokorora kudzokorora yekutengesa uye purofiti fungidziro, asi zvinogona zvakare kuve imwe nzira yakatenderedza. Ndokureva, nekufungidzira kumusoro pamusoro pemitsara yayo yebhizinesi, kunyangwe ichi chisiri chinhu chinowanzoitika, iri rudzi rweyambiro yemusika wemasheya. Ivo vanowana rakakosha basa mune iyo nguva iyo ivo yavanogona kushandira kuitira kuti vadiki nepakati varimimari vagone kuvandudza yavo kushanda muhomwe. Chero kuvhura kana kugadzirisa zvigaro, zvinoenderana nenyaya imwe neimwe.
Kune rimwe divi, yambiro dzebatsiro dzinotarisirwa kwazvo nemhando dzese dzevamiriri vezvemari kuitira kuti ivo vagone kuwana vanozvisarudzira vega sekureva kwekudyara. Nekuti zvirizvo, rudzi urwu rweyambiro munyika yemusika wemasheya unoshandira vamiririri vezvemari kugadzirisa iyo yakatarwa mutengo wezvikamu, kungave kumusoro kana pasi, zvinoenderana nenyaya imwe neimwe. Chero zvazvingaitika, zvine kukosha kwakanyanya pane yavo kukosha. Kusvika pakukwanisa kwavo kuona shanduko yayo mumisika yemari, mune imwe pfungwa kana imwe.
Kune rimwe divi, hapana mubvunzo kuti yambiro dzebatsiro dzinotyiwa kwazvo nevazhinji vanoita mari nekuti vanogona kukanganisa iyo stock kudonha. Kana zvakatonyanya, senge yechisimba tsika inodzoka Neichi chikonzero chaicho, iwe unofanirwa kuve wakangwarira kana uchitsikisa iyi yambiro nekuti inogona kuunza kushamisika kusinganzwisisike kunogona kukanganisa yako portfolio. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye kusvikira iwe wagona kubva pakakosha poindi yekutarisa. Usakanganwe kuti kukosha kwayo kuri kumberi pane izvo zvinotaurwa muyambiro yeprofiti.
1 Yambiro yehupfumi: maonero akaipa
2 Ongororo mumakotesheni
3 Ichangopfuura mienzaniso ine purofiti yambiro
4 Kuita kwemusika
5 Kambani inosungirwa
6 Batsirwa kuderedzwa
Yambiro yehupfumi: maonero akaipa
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chechokwadi uye ndechekuti yambiro dzebatsiro dziri kupihwa gore rino hadzisi dze hapana chakanaka vanomisa zvido zvemakambani akanyorwa pamisika yemari. Zvese zviri zviviri maererano nemisika yemakondinendi ekare uye eAmerica. Mupfungwa iyi, haukwanise kukanganwa kuti kudzokororwa kwakadzikira kwekufungidzira muUnited States kuri padanho repasi kubva 2016. Izvi zvinogona kunge zvichipa chiratidzo nezve zvingangodonha mumisika kune rimwe divi reAtlantic, asi izvo zvinokanganisawo veEuropean.
Kuderedzwa kwefungidziro yemari iri kutora nzvimbo, nehukuru hwakakura kupfuura zvaitarisirwa, kuri kuisa kusahadzika kudzorerwa kwemusika wemasheya muchikamu chekupedzisira chegore uye zvakare kune rinotevera gore remari. Vanodonha nemahara anoenda 3% uye kusvika 10%, iyo isiri chiratidzo chakanaka chekutengesa pamusika wemasheya. Iyo inogona kuve yambiro nezve izvo zvinogona kuitika kwauri mune ako ekudyara kubva zvino zvichienda mberi. Kunze kwega kwega makambani akanyorwa paCAC 40, ayo ari iwo ane akamira akanakisa akabuda mune idzi ongororo.
Muzviitiko izvi, makambani akayambira nekuderedzwa kwekufungidzirwa kwemari aona mafambiro emitengo yavo kudonhedza pasi zvishoma nezvishoma. Hazvishamise kuti yavo yemitengo yakadzikiswa uye mune dzimwe nguva nehukuru hwakanyanya mukuderera. Mupfungwa iyi, yambiro dzebatsiro chitsidzo chekuti chimwe chinhu chiri kufamba mushe mumakambani avo kana kuti zvimwe vane matambudziko ekuvandudza mhedzisiro yekota. Ichi chinhu chekuongorora kana uchiongorora mari yako yekudyara kuitira kana zvichikosha kuti uisiyanise chero nguva kudzivirira zvido zvako semudyari mudiki nepakati.
Kune rimwe divi, zvinonakidza kwazvo kuziva kuti kwakawanda kwekuchinja kwemitengo yemakambani akanyorwa kwakatorwa kubva pane idzi yambiro. Kusvika pakuti pane misiyano mikuru munguva pfupi pfupi yenguva, mushure mekunyeverwa nezvebatsiro uku. Mumaawa mashoma, kutengesa kukuru kana kutenga zvazvino zvinogadzirwa, zvinoenderana nezviitiko zvese nemamiriro. Mupfungwa iyi, hapana kudzokera kumashure mune zvisarudzo zvevashambadzi vanoteerera nekutendeka aya mazano akatumirwa nevamiriri vemari.
Ichangopfuura mienzaniso ine purofiti yambiro
Semuenzaniso, hapana zvirinani kupfuura izvo zvakaitika munguva pfupi yapfuura nekambani Cie Zvemotokari. Zvakanaka, zvave zvakakwana kuti yambiro yehunhu uhu iziviswe kuti zvikamu zvayo zvadzikira zvine simba mukufamba kwemisika yemari. Nekuti zvirizvo, kunyeverwa kwemubhadharo wakaderera wakaitwa pachena gore rese mukambani ino, wakonzera kuti ivhare mazita ayo nekurova kwakasimba, ichipfuura mumaawa mashoma, ichidonha ingangoita 7% kusvika 23,16, 35 euros. Kuve, mune chero mamiriro ezvinhu, imwe yeakanyanya kurangwa tsika mukati meIbex XNUMX.
SaCie Automotive, izvi zvakaitika nemamwe makambani akanyorwa pamusika wemasheya, mamwe acho aine kukosha kwakakosha mukati memasheya avo emasheya. Izvi zvinoratidza kukosha kukuru uko kufambiswa kwezviziviso izvi pamamiriro emakambani kwakawanikwa mumakore apfuura. Semhedzisiro yezviito izvi, mamaneja emari ekudyara anoderedza zvinhu zvavo mumakambani akanganiswa kuitira kuti iyo kutengesa rwizi inoiswa pachena pane iyo yekumanikidza yekutengesa. Ichi chinhu chiri nyore kwazvo kune vese ma profiles ma profiles kuti vanzwisise. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Muzviitiko zvese, mhinduro yemisika yemari inenge nguva dzose isina kunaka zvakanyanya, isina chero mhando yemhando. Hazvishamisi kuti mamiriro ezvinhu anokonzeresa kudonhedza mumutengo wakarondedzerwa wekuchengetedzwa kwekambani. Kunyangwe zvingave zvakadaro mamiriro ezvinhu aya anogona kudzikiswa kubva pamutengo wawo chero mamiriro ezvinhu. Zvakare kuti panogona kuve nezvimwe zvakasiyana pamitengo nekuti varimi vanotarisira yakakura (kana idiki) kutemerwa mukufungidzira kwavo. Iyi yekupedzisira yakajairika mumisika ye equity sezvo idzi yambiro dzinogona kudonha kana kutoburitswa nevamwe vamiririri vezvemari.
Chokwadi ndechekuti kune makambani anokwanisa kupa yambiro dzinoverengeka dzebatsiro mugore rimwe chete remari uye chiitiko chakakosha ichi chinogona kutsausa vanopfuura investa mumwe kuita sarudzo dzako nezve zvekuita nemari yako. Nekuti iko kufamba kunowanzo teverwa nechakanaka chikamu cheavo vamiririri vanoshanda mumisika yemari. Kwete chete varimi, asiwo ma broker uye mamwe marudzi evamiririri mune yemusika wemusika chikamu. Kusvika padanho rekuti zviito zvinogona kutora kosi yakasiyana nguva imwe neimwe.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti chikamu chakanaka chemakambani akanyorwa anoita kuti zvavanowana zvionekwe paruzhinji vanosungirwa kuzviita paruzhinji kune vanoita mari kana izvi fungidziro yeramangwana zvisingaite. zvichave zvinogoneka mumakore anotevera. Izvi zvinoitika, kungave nekuda kwechishuwo chekutarisira kwakanyanya kana, zvinopesana, nekuda kweshanduko iri pachena mune zvinotarisirwa nemakambani.
Chero zvazvingaitika, ichi chinhu chidiki kwazvo chinozivikanwa chenyevero yemubatsiro uye chinozotarisirwa kana uchitora zvinzvimbo panguva idzodzo. Nechikonzero ichi, inogona kuve iri zano raunogona kushandisa kubva ikozvino zvichienda uye chero nguva yambiro yehunhu uhwu inogadzirwa mumakambani akanyorwa pamisika yemari. Usakanganwe nekuti inogona kukubatsira chiteshi mari yako uine zvivimbiso zvakakura zvekubudirira kupfuura pakutanga.
Chero zvazvingaitika, iri izwi rinogadzira kumwe kusanzwisisika pakati pevashambadzi vadiki nepakati uye ndosaka zviri nyore kujekesa kumwe kusahadzika nezve zvazvinoreva chaizvo. Eya, kuti uagadzirise iwe unofanirwa kuziva kuti yambiro yeruzhinji yakadaro mukuita inogara ichibatana kuderedzwa mune zvinotarisirwa mabhenefiti, kwete kuwedzera kusingatarisirwi. Icho chirevo chaunofanira kufunga nezvacho nguva dzese paunosangana nekuongororwa kwemakambani akanyorwa akapfuura neiyi yakasarudzika maitiro.
Hapana nzira, iwe unofanirwa kuitora pasi nekuti mushure mezvose tarisa iyo chaicho mutengo wemari. Izvo zvakakosha kupfuura kunyangwe iro rakakosha dhata pamusoro pavo, kunyangwe uchitanga kubva kune rimwe zano rakasiyana zvakanyanya kuti iwe ugone kupinda kana kugadzirisa zvigaro mumisika yemari.
Hazvishamise kuti ichi ichokwadi chauchazosangana nacho muinvestment world uye icho chinogona kukubatsira iwe mukuvandudzwa kwemabasa emusika wemasheya. Pamwe kupfuura mamwe ma parameter aunoshandisa neakawandisa mafinvestment mukati memakore apfuura. Zvirinani ichi chinyorwa chinenge chakubatsira iwe kuitira kuti kubva ikozvino iwe uzive chimwe chinhu zvimwe pamusoro peiyo yambiro yero iri chaizvo. Ichokwadi kuti ichave iri nzira, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Ndezvipi yambiro yedzidzo?